समाचार Archives - Page2of 11 - सप्तरंगी संसार::– रंगिबिहिनहरुको रंग
एकदिन बेलुकापख मेरो श्रीमतिले औंठी चोरेको आरोप पटक -पटक मेरो आमालाई लगाउँदै थिईन । र म उनलाई चुपलाग भनेर सम्झाईरहेको थिंए । तर मेरो श्रीमती चुप रहनै मानिनन र उनले झन चर्को स्वरमा सराप्न...
निधारमा निस्किएको सानो मासुको ड,ल्लो अस्वभाविक रुपमा बढ्दै जाँदा ३५ वर्षीया विष्णुमाया मगरको अनुहार नै छोपियो।
निधारमा निस्किएको मासुको डल्लो अस्वभाविक रुपमा बढ्दै जाँदा मेचीनगर नगरपालिका– ८ की ३५ वर्षीया विष्णुमाया मगरको अनुहार नै छोपिन थालेको छ । गीरबीका कारण उपचार गर्न नसकेर अनुहारभरि पलाएको मासुको डल्लो बोकेर भौतारिरहनुभएका विष्णुमायाको...
संसारकै स`बैभन्दा सानो पु`न्टे गाई, सामाजिक सञ्चालनमा चर्चित बन्दै, देख्नेहरु हेरेको हे`र्यै भए
संसारकै सबै`भन्दा सानो पुन्टे गाई, सामाजिक स`ञ्चालनमा चर्चित बन्दै, देख्नेहरु हेरे`को हेर्यै भए । एउटा अनौठो पुन्टे गाई सा-माजिक सं-जालमा भा-इरल बनेको छ जुन खबर हो बंगलादेशको । अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार बंगलादेशको चरिग्रामस्थित एक...
भारतीय कलाकार अनुपमले पशुपतिमा पुजा गर्दै भने, ‘मलाई यहाँ आउँदा शान्ती मिल्छ’ ।
चलचित्र छायांकनका लागि बलिउड कलाकारहरु काठमाण्डौ आएका छन् । चलचित्र ‘उचाई’को छायांकनका अनुपम खेर, परिणती चोपडा लगायत ३ जना कलाकार नेपाल आएका हुन् । काठमाडौ आइपुगेका अनुपमले मंगलवार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर पुजा गरेका...
तीन वर्ष थुनामा बसेपछि निर्दोष ठहर(भिडियो हेर्नुहोस्
काठमाडौं । तस्करीको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि उर्लाबारीका सनम शाक्यको अपहरणपछि हत्या भयो ।तस्करी प्रकरणका नाइके मध्येका एक चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले सुन खोज्ने क्रममा शाक्यको हत्या भएपछि तस्करीको र्‍याकेटकबारे अनुसन्धान सुरु भयो...
एउटी आमाको लागि उनको बच्चाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ । बच्चाको शरीरमा थोरै कोरि`यो भने पनि आमा निकै आत्तिन्छिन् । बेला`यतकी २४ वर्षकी एक महिलालाई पनि यस्तै भयो । बेकी...
गायिका टिका सानुले आफ्नै जिवन कहानीमा सार्बजनिक गरिन टेलिसिरियल ‘ कथा माइलिको ‘
टिका सानुको स्टाटस : सुभ बिहानी सम्पुर्ण मा!मैले हिजो भोगेको जिन्दगी आज म आफै लाई सपना जस्तै लाग्छ ।अर्का को घर को बास चप्पल काटेर बालेर पढ्न बस्नु , तेल नहुदा लगातार 5/7 छाक...
पार्किङ्गकाे बिषयमा बि,वाद हुदाँ छोराले थ,प्पड हा`ने आफ्नै बुढी आमाको यस्ताे हालत ….
पार्किङ्गकाे विषयमा वि,वाद हुदाँ छोराले थ,प्पड हा`ने आफ्नै बुढी आमाको यस्ताे हालत । भनिन्छ यो संसारमा आमा भन्दा ठूलो कोही पनि हुँदैन, आमालाई नै ईश्वरको दाश्रो रुप मानिन्छ, अरुको लाख आमाको काख पनि भनिन्छ...
नवजात शि”शुको टाउ”कोमा चो”ट, श-व लिएर आए आफन्त , अ”स्पतालको ग”ल्ती हो? exclusive gandaki hospital यो पनि पढनुहोस्। पहेलो दाँत तथा श्वास गन्हाउँने समस्याबाट यसरी पाउनुहाेस छुटकारा यदि तपाईको दाँत पहेलो भएको छ वा मुखबाट श्वास गन्हाउँछ...